Ikhtiyaarada Thanksgiving iyo Christmas-ka ee Cunnooyinka Taayirada Macaamiisha iyo Mutadawiciinta - Cuntooyinka Shaagagga
Ikhtiyaariyada iyo Xulashada Kirismaska ee Cunnooyinka Macaamiisha Laydhka iyo Tabaruceyaasha
Sida ururo kale oo badan, Meelaha Cuntada ee Widels badankoodu way xiranyihiin ciidaha caadiga ah. Halka inta badan macaamiisheenu ay ikhtiyaar u leeyihiin inay qabow galaan cuntada la geeyey si loogu isticmaalo maalmahaas, waxaan inta badan helnaa wicitaano ku saabsan fursadaha iskaa wax u qabso, iyo sidoo kale gaarsiinta cuntada kulul.
Haddii aad raadineyso fursad iskaa wax u qabso ah oo xiiso leh qoysaskaaga xilliyada ciidaha, ama aad jeceshahay cunno kulul, halkan waxaa ku yaal xulashooyin dhowr ah:
Cunnooyinka Mahadcelinta ee Wheels. 651-699-5404.
Barnaamijkan wuxuu ka madax bannaan yahay barnaamijyada Cuntada ee Daba-galka oo bixiya cunno joogto ah wuxuuna si adag diiradda u saaraa u adeegidda cunnooyinka Thanksgiving-ka sanadkiiba mar. Cunnooyinka Thanksgiving ee Wheels waxay diyaariyaan cunno ka kooban turkey, labis, baradhada, digirta, galleyda, qolofleyda, duub, keega bocorka iyo caanaha qoysaska u baahan waxayna u gaysaa guryahaas maalinta mahadnaqa. Adeegani waa u diyaar dhammaan dadka u baahan - maahan kaliya waayeelka. Fursado iskaa wax u qabso ah ayaa sidoo kale la heli karaa.
Mutadawiciin uqoran inay u adeegaan dadka (VEAP). 952-888-9616, www.veapvolunteers.org/services/food-program
Barnaamijka Cuntada Fasaxa ee VEAP wuxuu bixiyaa cunnooyin kulul, oo ay ugu deeqaan makhaayadaha maxalliga ah iyo jameecooyinka, dadka waaweyn ee dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dakhligoodu go'an yahay ee guryaha la soo gala Easter, Thanksgiving, iyo Christmas Day. Gaarsiintaan ma aha oo kaliya inay bixiyaan cunto kulul fasaxa, laakiin sidoo kale booqasho saaxiibtinimo. Diiwaangelinta barnaamijkan waxay dhammaanaysaa Nofeembar 20.
Walaalayaal Yaryar, Saaxiibada Waayeelka. 612-746-0724, www.littlebrothersmn.org
Walaalaha Yar yar, Saaxiibada waayeelka waa urur isku xira mutadawiciinta iyo dadka waaweyn ee waaweyn. Iyada oo qayb ka ah waxqabadyadaas, waxay martigeliyaan shirar ka dhaca meelo kala duwan oo ku yaal Magaalooyinka Mataanaha ah inta lagu gudajiro Thanksgiving iyo Christmas. Wac ama booqo boggooda hawlo gaar ah oo xaafadaada ka socda.
In kasta oo kuwani ay yihiin barnaamijyo fasax gaar ah, waxaan had iyo jeer u baahanahay mutadawiciin si ay u bixiyaan cunnooyin sannadka oo dhan. Waad awoodaa saxeex si aad u keento cuntada si deg deg ah oo fudud websaydhkaaga waxaadna u geyn kartaa sida ugu badan ee aad jeceshahay! Haddii adiga, ama qof aad jeceshahay, aad ubaahantahay cunto caadi ah, waad awoodaa iska qor khadka sidoo kale.
Nofeembar 19, 2013